Dilka Qadaafi iyo Mustaqbalka Libya - BBC News Somali
Dilka Qadaafi iyo Mustaqbalka Libya
21 Oktoobar 2011
Waxaa jira sawirro muujinaya hogaamiyaha hore ee Qadaafi oo nool oo dhiig uu ka da'ayo, kadib markii lagu qabtay magaaladii uu ku dhashay ee Sirte.
Maamulka cusub ee Libya wuxuu sheegay inuu ku dhintay rasaastii ay isweydaarsanayeen taageerayaashiisa iyo xoogaga xukuumadda cusub magaalada Sirte khamiistii shalay. laakinse Qaramada Midoobay waxay leedahay sidii uu u dhintay waa in baaritaan weyn lagu sameeyo.
Shalay oo bishan Oktoobar 20 ahayd waxaa la soo afjaray dagaal hubaysan oo muddo toddoba bilood ah ka socday dalka Libya, kaas oo dhiig badani ku daatay si xukunka looga tuuro hoggaamiyihii dalkaas, Kornayl Mucammar al Qadaafi.
Dalkan UK waxay sheegtay in aysan qiil u yeelayn dil sharciga ka baxsan.
Dawlado badan oo adduunka ah ayaa soo dhaweeyey geeridii gaddaafi oo leh bog arxan daran oo taariikhda Libya galay ayaa soo xirmay. Gaashaanbuurta NATO waxaa lagu wadaa in maanta shir ay ku yeelanayso magaalada Brussels ku go'aamiso in hawlgaladii ay ka waday Libya la soo af-jaray.
Waxaase dadka qaar ka digayaan inay dhici karto Libya in ay gasho marxalad jahawareer, fowdo iyo qas ah, haddii aan si miisaan iyo isu-tanaasul ah loo maareyn waxyaabaha ka dhacaya Libya.